Amanqanaba okuphumelela kwamahlathi kunye nokukhula
Indlela amaHlathi ashicilelwe ngayo, ukukhula kunye ne-Climax
Utshintsho olunempumelelo kwimimandla yezityalo lwaqatshelwa kwaye lwachazwa kakuhle ngaphambi kwekhulu lama-20. UFrederick E. Ukwaziswa okucwangcisiweyo kwaqulunqwa kuba yinto ecacileyo ngelixa wayidala isigama sokuqala kwaye washicilela inkcazo yokuqala yesayensi kwinkqubo yokulandelelana kwincwadi yakhe, i-Plant Succession: Uhlalutyo loPhuhliso lweMifuno. Kuyathakazelisa gqitha ukuba iminyaka engamashumi amathandathu ngaphambili, uHenry David Thoreau wachaza ukulandelana kwehlathi okokuqala ngqa kwincwadi yakhe, i-Succession of Forest Trees.
Imithi ithatha indima enkulu ekudaleni i-cover cover emhlabeni xa izimo zikhula ukuya kwindawo apho kungekho mhlaba kunye nomhlaba okhoyo. Imithi ikhula kunye neengca, imifuno, i-ferns, kunye nezihlahla kwaye zikhuphisana nalezi zityalo kwiindawo zezityalo eziza kutshintsha kunye nokuphila kwazo njengezilwanyana. Inkqubo yaloo mzabalazo kwisiza esinezinzileyo, esivuthiweyo, esiqingqiweyo, sibizwa ngokuba ngumlandelelwano olandela indlela elandelelanayo kwaye isinyathelo ngasinye esona sifinyelele endleleni sibizwa ngokuba yi-seral entsha.
Ulandelelwano lweprayimari ngokuqhelekileyo lwenzeka ngokukhawuleza xa izimo zengqesho zingenabuhlobo kwizityalo ezininzi kodwa apho iintlobo ezimbalwa zezityalo ezikhethekileyo zingabamba, zibambe kwaye ziphumelele. Imithi ayisoloko ikhona phantsi kwezi meko zokuqala ezinzima. Izilwanyana kunye nezilwanyana ezizinzileyo ukuba zenze iindawo eziza kuqala ziza kubakho iindawo "ezisezantsi" ukukhaba kuqala ukuphuhliswa kobunzima bomhlaba kunye nokulungiswa kwemozulu yendawo.
Imizekelo yesayithi yale nto yayiza kuba ngamatye kunye neentaba, iingqungquthela, kuze kube yilapho, kunye ne-ash ash volcanic.
Zona zombini iziza eziziiprayimari neziziisekondari zilandelelwano olupheleleyo kwilanga, ukutshintsha kwezobudlova kumashishini, kunye nokutshintsha ngokukhawuleza kwiimeko zokufuma. Kuphela izinto ezinzima kunazo zonke ezinokuzilungelelanisa ekuqaleni.
Ulandelelwano lwesekondari luye lwenzeka ngokuqhelekileyo kwiindawo ezilahliwe, ukungcola, kunye negravel ezalisekile, ukucima kwendlela, kwaye emva kweendlela zokungena kwiindawo eziphosakeleyo apho kukho ukuphazamiseka. Ikwaqala kwakhona ngokukhawuleza apho uluntu olukhoyo lutshabalaliswa ngumlilo, izikhukhula, umoya okanye iintlekele eziwonakalisayo.
Ukucoca 'kuchaza indlela yokulandelelana njengenkqubo ebandakanya izigaba eziliqela xa ekugqityiwe kuthiwa "i-sere". Ezi zigaba zilandelayo: 1.) Uphuhliso lwesayithi elingenanto elibizwa ngokuba yiNudism ; 2.) Intshayelelo yezinto zokuhlaziya eziphilayo ezibizwa ngokuthi ukufuduka ; 3.) Ukusungulwa kokukhula kwezityalo okubizwa ngokuba yi- Ecesis ; 4.) Ukhuphiswano lwezityalo zendawo, ukukhanya, kunye nezondlo ezibizwa ngokuba yimpumelelo ; 5.) Utshintsho lwezityalo zoluntu oluchaphazela indawo yokuhlala ebizwa ngokuba yi- Reaction ; 6.) Ukuphuhliswa kokugqibela kwendawo yoluntu ebizwa ngokuba yiStabilisation .
Ukuphumelela Kwehlathi kwiinkcukacha ezingakumbi
Ulandelelwano lweHlathi lubhekwa ngokulandelelana kwesekondari kwiindawo ezininzi zezinto eziphilayo kwimihlaba kunye neengqungquthela zezilwanyana kodwa zinegama elithile. Inqubo yehlathi ilandelelanisa ixesha lokutshintshwa kwezilwanyana kunye nalolu hlobo: ukusuka kwiimbewu zokuphayona kunye neengcambu kwihlathi eliguqukayo ukuya kumahlathi atsha lokukhula ukuhluma amahlathi kwihlathi elidala lokukhula .
Amahlathi ngokubanzi alawula imimiselo yemithi ephuhlisayo njengenxalenye yesibini esilandelayo. Iintlobo ezibalulekileyo zomthi ngokwexabiso loqoqosho ziyingxenye yesinye sezigaba ze-seral ngaphantsi kwesiqhamo. Ngoko ke, kubalulekile ukuba i-forester isebenzise ihlathi layo ngokulawula ukuthambekela kwaloo ndawo ukuba ihambele kwihlathi elincinci. Njengoko kuboniswe kwisicatshulwa samahlathi, iMigaqo yeSilviculture, i-Second Edition , "abalimi basebenzise iindlela zesohlwayo ukuze bahlale bejonge kwisigaba se-seral esichazela iinjongo zoluntu ngokubanzi."
Indlela Yokugcina Umthi Wakho Krisimesi Ulungele Zonke Ixesha
Ukuphuhlisa ukuqeshiswa kweHlabathi lokuHluma komhlaba
Iirekhodi ze-Age-Shooter eGoli
Fumana Imisebenzi Yobambiswano kwiNgingqi Yakho
Yonke Nge-White Oil kunye ne-Acrylic Artists Paint